Monday May 14, 2018 - 15:30:03 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Geel laba jir soo wada mar, wadamada ugu dhaqaalaha badan aduunku sida China,Jabaan, Yurubta galbeed, Konton sano ka hor waxaa ka jirtay shaqo la aan, iyo dhaqaale xumo. Dad kooduna waxay u hajireen wadamadii ay ku tuhun sanaayeey in ay wax dheer yahiin. Wadamadaas aan kor ku xusay waxay ku hore mareen siyaasad furan oo ay dawladahoodu u dhigeen kana mid tahay in ay shacabku si saami qaybsiya wadankooda ugu maal gashan lahaayeen. Qofkasta oo fikrad horumar hayana loo dhagaysan lahaa.
Shirkada Daewoo ee baabuurta sameysa lagana leeyahay Koonfurta kuuriya ayaa 1999 ku dhawaatay in ay kacdo, labaatankun oo shaqaale ahna waxay ku sigteen in ay shaqadoodii waayaan . Waxa lagu badbaadiyay markii ay dawladoodu u soo bandhigtay shicibka, si ay maalgelin ugu
sameeyaan, sidaas ayayna shirkadii ku badbaaday. Si looga baxo faqriga , fursado shaqo ahna loo abuuro , dakhliga dawladuna u kordho waa in awooda dadka la isku geeyaa, dawladuna ku dhiiri galisaa , wacyigalina samaysaa si muwaadiniintu hab saami qaybsiya warshado iyo dhaamam waawayn ugu dhisaan. Dadwaynaha Somaliland waxay jecelyahiin horumarka, waxaanan hubaa hadii dhaamam waawayn la dhisaayo shicibka , ciidamada kale duwan in si iskaa wax u qabso ah ay xaga muruqa kaga qaybqaadanayaan. Dadwaynahu waxay sugayaan oo kaliya jihayntii.
Gudigan shaqadoodu waxay noqonaysaa in ay dadwaynaha u soo bandhigaan waxa la maalgalinaayo, saamiga ugu yare ee lagaga qayb geli karo. Macaashka sida loo qaybsanaayo, hubinta iyo hirgalinta mashruucaasi iyo ilaalinta hantida dadka laga soo ururiyay. Waa hubaal hadii aynu awoodeena isku gayno in aynu ka maar mayno ku xidhnaanshaha xoolaha marba Carabtu xidhayso, baryada aynu qayrkeen gacmaha hoos dhiganayno. Waxa kale oo ay xoojinaysaa dhaqaalaheena marka laga yimaado, in ay wadamada geeska afrika iyo aduunkuba inagu xidhmaan.